I-Kameleoon: Injini ye-AI Ukubikezela Amathuba Okuguqulwa Kwesivakashi | Martech Zone
I-Kameleoon iyipulatifomu eyodwa ye- ukusebenza kwesilinganiso sokuguqulwa (CRO) kusuka ekuhlolweni kwe-A / B nokwenza kahle ukwenza kube ngokwakho okwenziwe ngesikhathi sangempela usebenzisa ubuhlakani bokufakelwa. Ama-algorithm we-Kameleoon wokufunda ngomshini abale izinombolo ze- ithuba lokuguqulwa kwesivakashi ngasinye (esiveziwe noma esingaziwa, ikhasimende noma okulindelwe) ngesikhathi sangempela, sibikezela ukuthenga noma inhloso yokuzibandakanya.
Ipulatifomu Yokuhlolwa KwamaKameleoon kanye Nokwenza Ngezifiso
I-Kameleoon iyiwebhu enamandla nesitaki esigcwele ukuhlolwa futhi ukuzenzela ipulatifomu yabanikazi bemikhiqizo yedijithali nabathengisi abafuna ukukhulisa ukuguqulwa futhi baqhube ukukhula okukhulayo kwemali engenayo online. Ngezici ezifaka ukuhlolwa kwe-A / B, ukuhlukaniswa kwabasebenzisi, ukuqondiswa kokuziphatha nedatha yesikhathi sangempela, iKameleoon isiza amabhizinisi ukuthi akhulise ukuguqulwa kwe-inthanethi futhi akhulise imali engenayo.
IForrester yenze izingxoxo ezijulile namakhasimende amaningi e-Kameleoon kuzo zonke izimboni kufaka phakathi i-e-commerce, ezokuvakasha, ezezimoto nokuthengisa ngemiphumela yabo ebekiwe.
Izinzuzo zeKameleoon ezikhonjwe esikhathini esiyiminyaka emithathu zifaka:
Kuya ku Ukuthuthuka okungu-15% kwamazinga okuguqulwa ngokwenza isipiliyoni sezivakashi zewebhu nokwenza ukuxhumana kube ngokwakho ekwenzeni ngcono ukuguqulwa. Lokhu kusho inzuzo yeminyaka emithathu elungiswe engcupheni engu- $ 5,056,364 kunani lamanje.
Kuya ku Ukwanda okungu-30% kokuthengiselana okuthengiswayo, ngokuhlaziywa kokuziphatha nokuqukethwe kukaKameleoon okusiza ukuthi imikhiqizo ikhuphule inani lemikhankaso ephumelelayo yokuthengisa. Lokhu kumela inzuzo ehlanganisiwe yeminyaka emithathu ebekiwe engcupheni engu- $ 577,728.
Ukwehliswa kwe-49% kumzamo wokusetha umkhankaso. Amandla okwenza ngezifiso we-AI anikwa amandla yi-Kameleoon nokwabiwa okunamandla kwamathrafikhi wewebhu kuya kumabhakede okuguqula amandla anciphisa kakhulu isikhathi esidingekayo sokusungula imikhankaso nokwakha okuhlangenwe nakho kwewebhu nokuxhumana, ngenkathi kukhulisa ukuzimela kwabakhangisi ngezindawo zokuxhumana ezinembile nezisebenziseka kalula. Lokhu kubonisa inzuzo engu- $ 157,898 kunani lamanje eminyakeni emithathu.
Ngaphezu kwalokho, amakhasimende akhombe lezi zinzuzo ezingenagunya ezilandelayo:
Okuhlangenwe nakho kweKhasimende okuthuthukisiwe (CX) - Ngokunika amandla ukulethwa kokuqukethwe nemiyalezo ehambisanayo, uKameleoon uvumela izinhlangano ukuthi zinikeze umuzwa ofanele, owenzelwe wena uqobo.
Ukwandiswa Kwesipiliyoni Sabasebenzi (i-EX) - Abasebenzisi bazizwa benamandla amakhulu njengoba bengenza ushintsho olulula nokulungiswa ezindabeni zemizuzu, yingakho bezizwa besebenza ngokwengeziwe futhi beqina - futhi benamandla ngokwengeziwe emsebenzini wabo.
Ukuletha okuhlangenwe nakho okwenziwe ngendlela ehambelana nedijithali manje sekumqoka empumelelweni yebhizinisi - nobhadane lusheshisa isidingo semikhiqizo ukugxila ekuhlolweni nasekuziphatheni. Lolu cwaningo kanye nokuhlaziywa kukaForrester kukhombisa ukuthi amandla nokusebenziseka kalula kweKameleoon kusekela kanjani amakhasimende ebhizinisi ezweni eliya ngokuncintisana, elenza ezidijithali, liletha i-ROI esheshayo nezinzuzo ezibalulekile zesikhathi eside zezezimali. ”
UJean-René Boidron, oyi-CEO, uKameleoon
Ngaphambi kokusebenzisa i-Kameleoon, izinhlangano zamakhasimende zazingenawo amandla okwenza umuntu nhlobo noma zazisebenzisa amapulatifomu wokuhlola we-A / B ayentula izinjini zokubikezela kanye nokushaya amagoli. Bazizwe sengathi bantula amandla okuthuthukisa amazinga wokuguqulwa ngokunika amandla ukwakheka kwesipiliyoni sewebhu.
Izinkampani ezinkulu ezingaphezu kuka-450 zithembele kuKameleoon, okwenza kube yipulatifomu ephezulu ye-SaaS yokwenza ngezifiso okuqhutshwa yi-AI eYurophu. Lokhu kufaka phakathi abaholi be-ecommerce nokudayisa (Lidl, Cdiscount, Papier), abezindaba (Mumsnet, L'Equipe, Axel Springer), ukuhamba (SNCF, Campanile, Accor), ezezimoto (Toyota, Renault, Kia), izinsizakalo zezezimali (Axa, I-AG2R, i-Credit Agricole) nezempilo (i-Providence). IKameleoon ifinyelela ukukhula kwamanani amathathu ngonyaka kumakhasimende nakwezimali.
Cela i-Kameleoon Demo
Tags: ukuhlolwaaiUkwenza ngezifiso okwenziwa yi-aiukuhlukaniswa okuqhutshwa yi-aiAma-Analyticsukuhlakanipha okungekhona okwangempelaithuba lokuguqulwakhokhoikameleama-kcsukuzenzelaSpark